Tokyo Ichiban Japanese Language School at 12 ward ,
at 12 ward ,, Yangon Myanmar
ဂျပန်စာ လေ့လာသင်ယူနေသူများအတွက် သင်တန်းများ၊သင်ခန်းစာများကို ဝေမျှပေးနေသောpage
12 ward ,
1 Facebook users were in Tokyo Ichiban Japanese Language School. It'sa7 position in Popularity Rating for companies in Education category in Yangon, Myanmar
5864 FB users likes Tokyo Ichiban Japanese Language School, set it to5position in Likes Rating for Yangon, Myanmar in Education category
Tokyo Ichiban Japanese Language School 11.4.2015 မှ 20.4.2015 အထိ နှစ်သစ်ကူးကျောင်းပိတ်ပါသည်။ 21.4.2015 တွင်ကျောင်းပြန်ဖွင့်ပါမည်။
Published on 2015-03-31 02:54:29 GMT
あの....。 秋葉原には、どう行けばいいですか？ ano-.... akihabara ni wa, do- ikeba ii desu ka? ဟို.... အာခီးဟားဘာရကို ဘယ်လိုသွားရပါသလဲ။ １番線の電車に乗れば、２０分で着きますよ。 ichiban-sen no densha ni noreba, nijyuppun de tsukimasu yo. ပလက်ဖောင်းနံပါတ်(၁)ကရထားကိုစီးရင် မိနစ်၂၀နဲ့ရောက်ပါတယ်။ いくらですか？ ikura desuka? ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။ １９０円です。 hyaku-kyu-ju- en desu. ယန်း ၁၉၀ ပါ။
Published on 2015-04-29 03:46:54 GMT
明日、どこか行きませんか？ ashita, doko ka ikimasen ka? မနက်ဖြန်တစ်နေရာရာသွားရအောင်လား။ いいですね。 実は、僕、パソコンが欲しいんです。 ii desu ne. jitsuwa, boku, pasokon ga hoshii n desu. ကောင်းသားပဲ။ တကယ်တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလိုချင်နေတာ။ じゃあ、秋葉原に行きましょう。 たくさんお店がありますよ。 jaa, akihabara ni ikimasho-. takusan o-mise ga arimasu yo. ဒါဆို အာခီးဟားဘာရကိုသွားကြရအောင်။ ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်။
Published on 2015-04-28 06:28:25 GMT
9.5.2015 တွင် N5 Basic I တန်းခွဲသစ်စတင်ဖွင့်လှစ်ပါမည်။ လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် တက်ရောက်လိုသူများအမြန်ဆုံးစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Published on 2015-04-23 08:13:17 GMT
26.4.2015 တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့၊ Honkomagome ရှိ ABK Collage ကျောင်း၏ ကျောင်းရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူများတက်ရောက်နိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါသဖြင့်ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ အချိန် - မနက် (၉း၀၀) မှ နေ့လယ် (၁၂း၀၀) နေရာ - အမှတ်၂၇ဘယ်၊ ပထမထပ်၊ သင်္ဂဟလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း ၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - 09-73132829
Published on 2015-04-22 10:16:20 GMT
Happy Myanmar New Year💐💐💐💐💐
Published on 2015-04-17 05:09:05 GMT
この人かっこいいでしょう？ kono hito kakko ii desho-? ဒီလူကြည့်ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ (ဖက်ရှင်ကျတယ်။ ခန့်တယ်။) うん。いま、ドラマに出ているよね。 un. ima, dorama ni dete iru yo ne. အင်း...အခုတီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုမှာပါနေတယ်နော်။ ところで、クオンさんはどんな女性が好き？ tokorode, kuon-san wa donna josei ga suki? ဒါနဲ့ခုအွန်စံကဘယ်လိုအမျိုးသမီးမျိုးကိုကြိုက်လဲ။ 獏は料理の上手な人が好きです。 boku wa ryo-ri no jo-zu na hito ga suki desu. ကျွန်တော်ကထမင်းဟင်းချက်တော်တဲ့သူမျိုးကိုကြိုက်တယ်။
Published on 2015-04-09 03:13:34 GMT
ဂျပန်မှာနေထိုင်ရေးအတွက်မှတ်သားစရာ ကုမ္ပဏီပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေမှာဝန်ထမ်းတွေစုပြီး ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် အသစ်ဝင်လာတဲ့ ၀န်ထမ်းအသစ်တွေကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲနဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်ကူညီပေးခဲ့တာ၊ အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်တဲ့နှစ်ကုန်နှုတ်ဆက်ပွဲတွေကိုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အလုပ်ပြီးတဲ့အခါ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အတူတူ အရက်သွားသောက်တာ၊ လက်ဖက်ရည်သွားသောက်တာတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်။ အရက်မသောက်နိုင်လို့ငြင်းမယ်ဆိုလည်းပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုရွေးချယ်သုံးဖို့တော့လိုပါတယ်။ ငြင်းတဲ့အခါအကောင်းဆုံးကတော့ အကြောင်းပြချက်ကိုထည့်ပြီး (Sumimasen, o-sake wa nomenai n desu) "စိတ်မရှိပါနဲ့အရက်မသောက်တတ်လို့ပါ။" လို့ပြောရင်ရပါတယ်။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေဟာ အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးဖို့အခွင့်အရေးပါ။ ဒါကြောင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါ သွားတာကောင်းပါတယ်။
Published on 2015-04-08 05:17:01 GMT
28.4.2015 တွင် ဖွင့်မည့်သင်တန်းများ Basic II သင်တန်းချိန်- 12:00-2:00 Pm Inter II သင်တန်းချိန်-2:00-4:00 Pm Basic Kanji သင်တန်းချိန်-4:00-6:00 Pm
Published on 2015-04-07 08:48:51 GMT
仕事に慣れましたか？ shigoto ni naremashita ka? အလုပ်မှာကျင့်သားရလာပြီလား။ はい。おかげさまで。 hai. okadesama de. ဟုတ်ကဲ့။ယာမဓစံရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ ところで、どうしてこの会社を選んだんですか？ tokotode, do-shite kono kaisha o eranda n desuka? ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီကုမ္ပဏီကိုရွေးခဲ့တာလဲ။ ここの技術力に興味があったからです。 koko no gijutsu-ryoku ni kyo-mi ga atta kara desu. ဒီကုမ္ပဏီရဲ့နည်းပညာစွမ်းရည်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပါ။
Published on 2015-04-07 04:19:07 GMT
ဂျပန်မှာနေထိုင်ရေးအတွက်မှတ်သားစရာ နှုတ်ဆက်စကား ဂျပန်မှာအခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး အမျိုးမျိုးကွဲပြားတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားတွေရှိပါတယ်။မှတ်ထားသင့်တဲ့ နှုတ်ဆက်စကားတချို့ကိုပြောပြပါမယ်။ ပထမဆုံးမှတ်သားစေချင်တာကတော့အပြင်ကပြန်လာသူကပြောတဲ့ (ပြန်ရောက်လာပါပြီ) လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ Tadaima နဲ့ အဲဒီနေရာမှာပဲရှိနေတဲ့သူကပြောတဲ့ (ပြန်လာပြီကိုး) လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ O-kaeri nasai ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားမှတ်သားရမယ့်နှုတ်ဆက်စကားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ အပြင်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် Itte kimasu (သွားလိုက်ပါဦးမယ်) လို့ပြောရပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့သူက Itterasshai (သွားတော့နော်) လို့ပြန်ပြောရပါတယ်။ အစားမစားခင်မှာ Itadakimasu (စားပါတော့မယ်) လို့ပြောပြီး၊ စားပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Gochiso- sama deshita (စားလို့ကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။) လို့ပြောရပါတယ်။ ကိုယ့်ကို တစ်ယောက်ယောက်ကကျွေးမွေးတဲ့အခါမှာလည်း စားပြီးရင် Gochiso- sama deshita လို့ပြောရပါတယ်။ အိပ်ရာဝင်တော့မယ်ဆိုရင် o-yasumi nasai (ကောင်းကောင်းအနားယူပါ) လို့ပြောပါတယ်။ တစ်ဖက်လူက အဲဒီလိုပြောလာရင် O-yasumi nasai လို့်ပဲပြန်ပြောရပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကိုကောင်းကောင်းသုံးနိုင်ရင် ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါ ပိုပြီးရင်းနှီးမှုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Published on 2015-04-02 04:05:56 GMT
ただいま戻りました。 tadaima modorimashita. အခုပဲပြန်ရောက်လာပါပြီ။ おかえりなさい。 o-kaeri nasai. ပြန်လာပြီကိုး။ どうでしたか？ do- deshitaka? ဘယ်လိုနေလဲ။ まあまあだと思います。 ma-ma- da to omoimasu. မဆိုးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ 契約まであと一歩です。 keiyaku made ato ippo desu. စာချုပ်ချုပ်ဖို့နောက်တစ်ဆင့်ပဲလိုပါတော့တယ်။
Published on 2015-04-01 04:01:01 GMT
နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပိတ်ရက်အပြီး ဂျပန်စာ Level N5, N4, N3, N2, N1 အတန်းစုံနှင့် Speaking သီးသန့်အတန်း၊ Kanji သီးသန့်အတန်း၊ June Nattest Exam အတွက် Practice သီးသန့်အတန်း၊ Business kaiwa သီးသန့်အတန်းများကိုဖွင့်လှစ်ပါမည်။တက်ရောက်လိုသည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်များကို ဆရာ/ဆရာမများနှင့်ညှိနှိုင်းသင်ကြားနိုင်ပါသည်။ သင်ကြားနိုင်သည့်နေ့များ- အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြားသပတေး - စနေ၊ တနင်္ဂနွေ
Published on 2015-03-31 07:17:46 GMT
今日は緊張しました。 kyo- wa kincho- shimashita. ဒီနေ့စိတ်အိုက်သွားတယ်။ 部長、あの会社ですが....。 bucho- , ano kaisha desuga... ဋ္ဌာနမှူး၊ အဲဒီကုမ္ပဏီက.... クオンさん、エレベーターの中では静かにしてください。 kuon-san, erebe-ta- no naka de wa shizuka ni shite kudasai. ခုအွန်စံ ဓာတ်လှေကာထဲမှာတိတ်တိတ်နေပါ။
Published on 2015-03-31 06:05:52 GMT
こちらが新しい冷蔵庫のパンフレットです。 kochira ga atarashii reizo-ko no panfuretto desu. ဒါကရေခဲသေတ္တာအသစ်ရဲ့လက်ကမ်းစာစောင်ပါ။ どんな特長があるのですか？ donna tokucho- ga aru no desuka? ဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိပါသလဲ။ 一番の特長は脱臭機能です。 臭いが気になりません。 ichiban no tokucho- wa desshu- kino- desu. nioi ga ki ni narimasen. အဓိက(နံပါတ်တစ်)ထူးခြားချက်ကတော့အနံ့ဆိုးတွေပျောက်စေတာပါပဲ။ အနံ့ကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရပါဘူး။ へえ。それはべんりですね。 he− sore wa benri desu ne. ဟာ....ဒါဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့။
Published on 2015-03-29 07:25:01 GMT
名刺は持ちましたか？ meishi wa mochimashita ka? လိပ်စာကဒ်ပါပြီလား။ はい。 hai. ဟုတ်ကဲ့။ 初めて営業に行くので緊張しています。 hajimete eigyo- ni iku node kincho- shite imasu. ပထမဆုံးအကြိမ်အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စနဲ့သွားမှာဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။(စိတ်အိုက်နေတယ်) 誰と行くんですか？ dare to iku n desu ka? ဘယ်သူနဲ့သွားမှာလဲ။ 部長とです。 bucho- to desu. ဋ္ဌာနမှူးနဲ့ပါ။ ３時にここを出ます。 sanji ni koko o demasu. ၃နာရီမှာဒီကနေထွက်ပါမယ်။
Published on 2015-03-28 03:51:34 GMT
いつもお世話になっております。 itsumo o-sewa ni natte orimasu. အမြဲတမ်းကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ こちらこそ、お世話になっております。 kochira koso o-sewa ni natte orimasu. ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ メールの件ですが、火曜日でよろしいでしょうか？ me-ru no ken desu ga, kayo-bi de yoroshii desho-ka? အီးမေးလ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ကိစ္စအင်္ဂါနေ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါသလား။ はい。お待ちしております。 hai. o-machi shite orimasu. ဟုတ်ကဲ့။ စောင့်နေပါမယ်။ では、火曜日に伺います。 dewa, kayo-bi ni ukagaimasu. ဒါဆိုအင်္ဂါနေ့ကျရင်လာပါမယ်။ 失礼します。 shitsurei shimasu. ခွင့်ပြုပါဦး(ခင်ဗျာ)။
Published on 2015-03-26 05:46:41 GMT
ဂျပန်မှာနေထိုင်ရေးအတွက်မှတ်သားစရာ ဖုန်းပြောတဲ့အခါနာမည်ခေါ်ပုံခေါ်နည်း ဖုန်းပြောတဲ့အခါယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကို မှန်ကန်အောင်သုံးနိုင်ဖို့ကခက်ပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချတဲ့အသုံးကိုသုံးပြီး တစ်ဖက်လူအတွက် ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးကို ကွဲပြားအောင်သုံးဖို့ပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့တစ်ရုံးထဲကလူအကြောင်းကို တခြားအပြင်ကလူကိုပြောတဲ့အခါနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောတဲ့အခါနှိမ့်ချပြီးပြောရမယ်။ဥပမာ သူဋ္ဌေးဆူဇူကီးဆီကိုဖုန်းလာတယ်ဆိုပါစို့။ ပုံမှန်ဆိုရင် ကိုယ်ကဆူဇူကီးသူဋ္ဌေး (ဆူဇူကီးရှချော) လို့ခေါ်နေကျဖြစ်ပေမယ့်ရုံးပြင်ပကလူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတော့ Suzuki wa gaishutsu shite imasu (ဆူဇူကီးမရှိပါဘူး။ အပြင်သွားပါတယ်။)လို့ပြောရပါမယ်။”သူဋ္ဌေး”ဆိုတဲ့ ရာထူး၊ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုပြတဲ့သကားလုံးနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ထည့်ရတဲ့ နာမည်ရဲ့နောက်က”စံ”ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖြုတ်ရပါမယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့မိသားစုနာမည်တွေကတော့ Sato၊ Suzukiနဲ့Takahashiပါ။ တခြားမိသားစုနာမည်တွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ခပ်ဆင်ဆင်တူတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ တစ်ခေါက်တည်းနဲ့မသေချာမသဲကွဲတဲ့အခါ အားမနာပဲနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မေးပါ။ (ကျေးဇူးပြုပြီးနာမည်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြပါ) ဆိုတာကို mo- ichido, o-namae o onegaishimasu လို့ပြောရပါတယ်။
Published on 2015-03-25 05:55:42 GMT
Lesson2これは何ですか kore wa nan desu ka さくらさん。はい、どうぞ。 sakura-san. Hai, do-zo. ဆာ့ခူရာစံ...... ရော့.....ကျေးဇူးပြုပြီးယူပါဦး။ これは何ですか？ Kore wa nan desu ka. ဒါကဘာလဲ။ それはタイのお土産です。 Sore wa tai no omiyage desu. အဲဒါကထိုင်းနိုင်ငံကအမှတ်တရပစ္စည်းပါ။ ありがとうございます。 Arigato- gozaimasu. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ どういたしまして。 Do-itashimashite. ရပါတယ်.. ....ကိစ္စမရှိပါဘူး ။
Published on 2015-10-25 07:18:42 GMT
Lesson 1 私はアンナです watashi wa anna desu はじめまして。私はアンナです。 hajimemashite. watashi wa anna desu. တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်မကအန်းနာပါ။ はじめまして。さくらです。 hajimemashite. sakura desu. တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ဆာ့ခူရာ ပါ။ よろしくお願いします。 yoroshiku onegai shimasu. အစစအရာရာ ကူညီပေးပါနော်။ (မိတ်ဆွေအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပါ) こちらこそ。 kochirakoso. ကျွန်မကလည်းခင်တတ်ပါတယ်။ (ကျွန်မကိုလည်းမိတ်ဆွေအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပါ)
Published on 2015-10-24 05:59:22 GMT
29.10.2015 နေ့တွင် Basic Speaking Class ဖွင့်ပါမည်။ အချိန်။ ။ 4:00_6:00 pm 4.11.2015 နေ့တွင် N5 Special သီးသန့်အတန်းဖွင့်ပါမည်။ အချိန်။ ။ 12:00_2:00 pm
Published on 2015-10-23 04:21:18 GMT
မင်္ဂလာပါ ဂျပန်စာလေ့လာနေသော မိတ်ဆွေအပေါင်းသို့ Tokyo Ichiban ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းမှ သတင်းကျွတ်အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် အခြေခံသင်တန်း N5(Basic1)Class ကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါမည်။ သင်တန်းကြေး (25000)********ဖြင့် ကြာသပတေး/ သောကြာ (ကြားရက်အတန်း) ညနေပိုင်း (4:00-6:00) 15.10.2015 အတန်းစမည်။ စနေ/တနင်္ဂနွေအတန်း 12:00-2:00 17.10.2015အတန်းစမည်။ #သင်တန်းသား(10)ဦးသာ#လက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။လာရောက်အပ်နှံထားခြင်းမရှိသောသူများစာရင်းသွင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ဆက်သွယ်ရန် Tokyo Ichiban Japanese Language Academy No.272(B) .4th Floor . Kyikekasan Road .Tamwe Tsp (Near Tamwe Zay Bus stop) Ph. 0973132829
Published on 2015-10-01 09:42:02 GMT
Tokyo Ichiban Japanese Language School ကို အမှတ် (၂၇) ဘယ်၊ ပထမထပ်၊ သင်္ဂဟလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် မှ အမှတ် (၂၇၂) ဘယ်၊ ၄ လွှာ၊ ကျိုက္ကဆံလမ်းမကြီး၊(တာမွေဈေးမှတ်တိုင်) တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ (30/9/2015) မှစ၍ ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Published on 2015-09-23 06:36:52 GMT
Japan စာ level အဆင့်ဆင့်အတွက် တန်းခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်ပါမည်။ တက်ရောက်နိုင်သောနေ့ရက်များ - -Wed/ Thus/ Fri -Sat/ Sun သင်တန်းနေ့- Wed/ Thus/ Fri သင်တန်းချိန်- 1:00~3:00/ 3:00~5:00/ 6:00~8:00 သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက်- 30/9/2015 သင်တန်းနေ့- Sat/ Sun သင်တန်းချိန်- 9:00~11:00/ 12:00~2:00/ 2:00~4:00 သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက်- 3/10/2015 မိမိတက်ရောက်မည့် level / အတန်းချိန်/ သင်တန်းကာလ/ သင်တန်းကြေးများကို Tokyo Ichiban ကျောင်းသို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဖုန်း- 09-73132829 JLPT/ Net Test အတွက် Practice တန်းများလည်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပါသည်။
Published on 2015-09-23 06:12:02 GMT
これは　ねびきしてあるのですか。 kore wa nebiki shitearu no desu ka. ဒီဟာတွေဒီနေ့လျော့ဈေးရောင်းတာပါလား။ たかすぎます。 taka sugimasu. အရမ်းဈေးကြီးတယ်။ そんなに　よさんが　ありません。 sonna ni yosan ga arimasen. ဒီလောက်ငွေမသုံးနိုင်ပါဘူး။ ねびきして　もらえますか。 nebiki shite moraemasu ka. ဈေးလျော့ပေးနိုင်သလား။ もっと　やすいものは　ありますか。 motto yasui mono wa arimasuka. ပိုပြီးဈေးပေါတဲ့ပစ္စည်းရှိပါသလား။ いちばん　やすいのを　みせてください。 ichiban yasui no-o misete kudasai. ဈေးအပေါဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြပေးနိုင်မလား။
Published on 2015-09-12 03:21:05 GMT
これは　いくらですか。 kore wa ikura desu ka. ဒီဟာဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။ このしいたけは　いちキログラム　いくらですか。 kono shiitake wa ichi kiroguramu ikura desu ka. ဒီမှိုက တစ်ကီလို ငွေဘယ်လောက်ပါလဲ။ ぜんぶで　いくらですか。 zenbu de ikura desu ka. အားလုံးဘယ်လောက်ကျပါသလဲ။ このねだんは　ぜいこみですか。 kono nedan wa zeikomi desu ka. ဒီဈေးနှုန်းကအမြတ်ခွန်ရော ပါပါသလား။ めんぜいで　かえますか。 menzei de kaemasu ka. ဒါကိုအမြတ်ခွန်လွတ်ရနိုင်မလား။ いちまんえん　ぜんごの　バッグは　ありますか。 ichiman en zengo no baggu wa arimasu ka. ယန်းတစ်သောင်းပတ်ဝန်းကျင်လောက် အိတ်ရှိပါသလား။ ほかに　おなじような　ねだんのものは　ありますか。 hoka ni onaji yoo na nedan no mono wa arimasu ka. တခြားဈေးတူတဲ့ပစ္စည်းရော ရှိပါသလား။
Published on 2015-09-11 04:14:02 GMT
ちいさすぎます。 chiisa sugimasu. သေးလွန်းတယ်။ これは　おおきすぎます。 kore wa ooki sugimasu. ဒီဟာကျွန်တော်နဲ့ အရမ်းကြီးတယ်။ もっと　おおきい　［ちいさい］ものは　ありますか。 motto ookii [chisai] mono wa arimasu ka. နဲနဲကြီးတဲ့ဟာ (သေးတဲ့ဟာ) ရှိပါသလား။ たけを　なおしてもらえますか。 take-o naoshite moraemasu ka. အရှည်ကိုပြင်ပေးလို့ရမလား။ いますぐ　なおしてもらえますか。 imasugu naoshite moraemasu ka. အခုပြင်ပေးလို့ရမလား။
Published on 2015-09-10 03:55:37 GMT
サイズが　わかりません。 Saizu ga wakarimasen. ကျွန်တာ် ကျွန်တော့ရဲ့ဆိုဒ်အရွယ်ကိုအစားကိုမသိဘူး။ サイズを　はかっていただけますか。 saizu-o hakatte itadakemasu ka. ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုဒ်ကို တိုင်းပေးမလား။ このコートを　しちゃくしても　よろしいですか。 kono kooto-o shichaku shite mo yoroshii desu ka. ကျွန်တော်ဒီကုတ်အင်္ကျီကိုဝတ်ကြည့်လို့ရမလား။ このシャツは　わたしに　あいません。 kono shatsu wa watashi ni aimasen. ဒီရှပ်အင်္ကျီက ကျွန်တော်နဲ့မတော်ဘူး။ このジャケットは　サイズが　あいません。 kono jaketto wa saizu ga aimasen. ဒီဂျာကင်ဆိုဒ်က ကျွန်တော့ဆိုဒ်မဟုတ်ဘူး။
Published on 2015-09-09 03:49:57 GMT
ほかのものを　みせてください。 hoka no mono-o misete kudasai. တခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုပြနိုင်မလား။ ちがう　デザインのものを　みせていただけますか。 chigau dezain no mono-o misete itadakemasu ka. ကျွန်တော်တခြားဒီဇိုင်းတစ်ခုခုကိုကြည့်လို့ရနိုင်မလား။ もっとしつのいいものが　ありますか。 motto shitsu no ii mono ga arimasu ka. တခြားအရည်အသွေးပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းများရှိပါသလား။ ほかの　いろが　ありますか。 hoka no iro ga arimasu ka. ပစ္စည်းတူပြီးအရောင်မတူတဲ့ပစ္စည်းများရှိပါသလား။
Published on 2015-09-08 02:49:05 GMT
いいえ、けっこうです。 iie, kekoo desu. ဟင့်အင်းမလိုတော့ဘူး။ すこし　かんがえてみます、ありがとう。 sukoshi kangaetemimasu, atigatoo. ကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားဦးမယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ まだ　きめていません。 mada kime teimasen. ကျွန်တော်ခုမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူး။ みているだけです。 miteiru dake desu. ကြည့်မိရုံသက်သက်ပါ။
Published on 2015-09-06 03:31:34 GMT
いかがですか。 ikaga desu ka. ဒီဟာကိုဘယ်လိုသဘောရလဲ။ これをください。 kore-o kudasai. ကျေးဇူးပြု၍ ဒီဟာပေးပါ။ これを　とっておいて　もらえますか。 kore-o totteoite moraemasuka. ဒီဟာကိုသိမ်းထားပေးမလား။ もちあ　わせが　ありませんので　あとでかいにきます。 mochiawase ga arimasen node ato de kainikimasu. ကျွန်တော့်မှာ ပိုက်ဆံအလုံအလောက်ပါမလာလို့နောက်မှလာယူပါမယ်။ ほしいものが　みつかりません。 hoshii mono ga mitsukarimasen. ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကရှာလို့မရဘူး။
Published on 2015-09-05 03:26:22 GMT
Tokyo Hikari Japanese Language School at No.28,Corner of Mingalar Street & Sayartun Street, Sanchaung Township
Essential English-မရှိမဖြစ် အင်္ဂလိပ်စာ at တိုက်-40၊ အခန်း-2(B)၊ ဒုတိယထပ်၊ အုတ်ကျင်းဘူတာရုံလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်
Phoenix Angel Online Shopping
Tin Tut Car Rental Service-Tour at 62(D), Pyay Rd,61/2 mile,Hlaing Tsp
M Bar&Kitchen at 6th ,5th floor, Elegant Pyi Thar Yar Hotel, pyi thar yar street, bouk htaw ,Yankin, 007
Regina Spa at Near Yinkin Center,Yinkin Township, 095
New York Auto Tech at 351, Pyay Road, Sanchaung Township, 351, Pyay Road, Sanchaung Township,Yangon
ISNA Elementary School at 1525 Sherway Drive, L4X 1C5, Mississauga
Power Glen Public School at 34 Westland Street, L2S 3W8, Saint Catharines
Annette Street Music, Education, Toronto
Book Arts with Andrea at Park Blvd, 92101, San Diego
Lubbock-Cooper High School at 16302 Loop 493, 79423, Lubbock
Kiddiewinks Pre-School Plymouth at Salisbury Road Baptist Church, Rosebery Avenue, St Judes, , PL4 8SX, Plymouth
Auto École Gold Conduite at9rue du 11 novembre, 42100, Saint Etienne